Munaasabad lagusoo dhawaynayay Weeraradii Kampala ka dhacay oo ay Haween Muslimaad ah Muqdisho ku dhigteen. | Halganka Online
Munaasabad lagusoo dhawaynayay Weeraradii Kampala ka dhacay oo ay Haween Muslimaad ah Muqdisho ku dhigteen.
Markii ugu horaysay ayay shacabka Muslimiinta ee magaalada Muqdisho u damaashaadeen Khasaarihii xooganaa ee shacabka Yugaandha kasoo gaaray weeraradii xooganaa ee xalay ka dhacay Kampala.
Haween Muslimaad ah oo ku dhaqan magaalada Muqdisho ayaa galabta Munaasabad balaaran ku qabtay magaalada Muqdisho waxayna kusoo dhaweeyeen weeraradii ay ciidamada Xarakada Shabaabul Mujaahidiin ku qaadeen magaalada kampala.
Haweenkan oo munaasabad ku qabtay xarunta Mu’asasada Al-Utrujah ee magaalada Muqdisho ayay ugu mahad celiyeen Shabaabul Mujaahidiin sida geesinimada leh oo ay ugu aar gudeen shacabka Soomaaliyeed ee xasuuqa kala kulmaya ciidanka shisheeye ee AMISOM la baxay.
Munaasabadii galabta ka dhacday magaalada Muqdisho waxaa Kalimado ka Jeediyay Haween Muslimaad ah oo isugu jiray Muhaajiriin iyo Ansaar dhamaantoodna waxay u Hambaleeyeen xarakada Shabaabul Mujaahidiin.
Umu Maa’idda oo kamid aheed Haweenkii Munaasabadda ku dhigtay Muqdisho ayaa sheegtay in aysan jeclayn ka hadalka Iclaamka balse ay arrinkaasi ku riixday arrimahan soo socda
1-In Alaah SWT la raali geliyo
2-In la carra geliyo Gaalada iyo kuwa raacsan
3-iyo in Mujaahidiinta loo muujiyo in quluubta Haweenku ay lajirto Mujaahidiinta haba kala fogaadeene.
Haweenkii maanta Muqdisho ku xafladeeyay waxay duco u direen ciidamada Mujaahidiinta oo ay alle uga baryeen in shahaadada ka aqbalo, qaar katirsan Haweenka waxay ahaayeen Muhaajiriin ku hadlayay Luqada English-ka waxaana ku adkaa luqada Soomaaliga.
Haweenay kasoo Haajirtay dalka UK oo Muqdisho ku sugan ayaa Fariin u dirtay shacabka Yugaandha oo ay ugu baaqday in ay Ooyinta joojiyaan waxbadana ay u dhimanyihiin Haween kalane waxay ugu baaqeen in ay Islaamaan si loo nabad geliyo.
Gaalada waxaan leenahay Islaama waad nabad gelaysaan,guryaheena nooga taga anagaa u diyaara dhamaanteen saqiir iyo Kabiir in aan shareecada isku xukuno aduunka oo dhana ku xukuno”.
Waa Dhacdo Ugub ah weli ma dhicin in Haween Muslimaad ah ay magaalada Muqdisho ku dhigtaan Munaasabad ay ugu tahniyadaynayaan xoogaga Mujaahidiinta Soomaaliya oo maalmihii lasoo dhaafay Guulo waaweyn ka gaarayay dagaalada Muqdisho ka socda.
Qaar katirsan Warbaahinta magaalada Muqdisho ayaa caawa laga baahiyay Hadaladda Haweenka Muslimaadka ah oo lahjad adag kula hadlayay kuwa diidan shareecada Islaamka waxaana xaqiiq ah in ay ka nexeen dad badan oo diidan Jihaadka Soomaliya ka socda.
« Sheekh Cali Dheere “Ilaah ayaa mahad leh Mujaahidiintu cadawgii ayay ku laayeen guryahooda,Jazaakumullaah ayaan leenahay Mujaahidiintii fuliyay weerarkii Kampala” Sheekh Shariif C/Nuur oo Raddinaya Culumada Jihaadka Diiddan »